5 Iimpawu eziphambili zeNdaba eziBalulekileyo
Sebenzisa ezi zixhobo ukuzisa izixhobo zakho ebomini
Amabali eendaba ezinzima ziqhelekileyo ukuhlanganiswa kwezinto. Ezinye zibhetele-zibhalwe kunabanye, kodwa zonke zikhona ukuze zizalise injongo elula-idlulise ulwazi.
Amanqaku omxholo , ngakolunye uhlangothi, injongo yokwenza okungakumbi. Bathumela iinkcukacha, ewe, kodwa baxelela amabali ebomi babantu. Ukuze benze njalo, kufuneka bafake iinkalo zokubhala ngokuqhelekileyo ezingabonakali kwiibali zeendaba , ezo zidla ngokudibanisa nokubhalwa kweengcamango.
Nazi izinto ezihlanu eziyimfuneko kunoma yiphi ibali .
Isaphulelo somsebenzi sinokubeka umzobo, uchaze indawo okanye uxele ibali. Naliphi na indlela esetyenziswa ngayo umgca kufuneka uthathe ingqwalasela yomfundi aze abenzele ibali.
Funda le ngxelo evela kwiNew York Times ibali malunga ne-New York Gov.Eliot Spitzer kunye neentlanganiso zakhe nehenyukazi kwihotele yase-Washington e-posh:
Kwaye emva kwe-9 ngobusuku ngaphambi koSuku lukaValentine xa ekugqibeleni efika, umfana omncinci ogama linguKristen. Wayenama-5-foot-5, ama-105. Ehle kwaye encinane.
Oku kwakukho i-Mayflower, enye yeehotele ezikhethiweyo zaseWashington. Umthengi wakhe ngokuhlwa, umthengi wokubuyisela, wayesebenze Igumbi 871. Imali awayethembise ukuyihlawula iya kuhlawula zonke iindleko: igumbi, i-minibar, inkonzo yegumbi kufuneka bawuthengise, ithikithi lezitim elalimkhuphe eNew York kwaye, ngokwemvelo, ixesha lakhe.
I-affidavit yephepha eli-47 elivela kummeli we-FBI uphando malunga neendlovu zobunongogo luchaze loo ndoda ehotele ngokuthi "Umxhasi 9" kwaye yaquka iinkcukacha ezininzi ngaye, ihenyukazi kunye neendlela zakhe zokuhlawula. Kodwa isigxina sokunyanzeliswa komthetho kunye nomnye umntu ochazwe kwimeko athathe iCenter 9 njengoEliot Spitzer, irhuluneli yaseNew York.
Qaphela ukuba iinkcukacha - i-brunette ye-5-foot-5-brunette, inombolo yegumbi, i-minibar-yakha umqondo wokulindela malunga nalo lonke ibali. Unyanzelekile ukuba ufunde ngakumbi.
Inkcazo ibonisa umcimbi webali kwaye izisa abantu neendawo zayo kuyo. Inkcazo efanelekileyo yenza ukuba umfundi abe nemifanekiso yengqondo engqondweni yakhe.
Naliphi na ixesha olifezekisileyo, uthabatha umfundi kwibali lakho.
Funda le nkcazo evela kwiSt. Petersburg Times ibali liLane DeGregory malunga nentombazana encinci, ifunyenwe kwigumbi elithintekayo:
Walala emattile ekratshiweyo phantsi. Wayephephelwa ngecala lakhe, imilenze emide yongena kwisifuba sakhe esiqwengileyo. Iimbambo zakhe kunye ne-collarbone yaxutywa; Ingalo enye yesikhumba yayisigxina ebusweni bayo; iinwele zakhe ezimnyama zahlutha, zihamba ngeqabunga. Izilwanyana, izilonda, kunye nezilonda zazikhupha isikhumba sakhe. Nangona wayebukeka ekhulile ngokwaneleyo ukuba abe esikolweni, wayesehamba-ngaphandle kwe-diaper evimbayo.
Qaphela okuthethiweyo: iinwele ezilitshiweyo, isikhumba esixutywe ngezilonda, i-matyress moldy. Inkcazo ibini ibuhlungu kwaye ihlaziyekile, kodwa kuyimfuneko ukuba idlulisele iimeko ezibuhlungu intombazana enyamezele.
Ndibhalile malunga nokubaluleka kokufumana iincwadana ezimnandi zeendaba zeendaba, kwaye kumabali amacandelo, oku kubaluleke kakhulu. Eyona nto ibali kufuneka ibandakanye kuphela izicaphuno ezibalaseleyo kunye nentsholongwane . Yonke into ifanele idibeneyo.
Khangela lo mzekelo kwiindaba zaseNew York Times malunga nokuqhuma kwebhilidi e-Oklahoma City ngo-Apreli 1995. Kwibali, intatheli uRick Bragg uchaza i-ribble kunye nokuphendula kwabadlali bokucima umlilo kunye nabasebenzi bokuhlangula abasabela kuloo ndawo:
Abantu babengenakuyeka ukukhangela, ngokukodwa umgangatho wesibini, apho kwakukho isikhungo sokunakekela abantwana.
"Umgangatho wonke," watsho uRayy Woods, umqhubi womlilo ngeNjini enguNombolo 7. "Umgangatho opheleleyo wabangenacala. abantwana banokwenza nabani na. "
I-Anecdotes ayikho nje ibali elifutshane nje. Kodwa kwiimpawu, zinokusebenza ngokukhawuleza ekuboniseni amaphuzu aphambili okanye ukuzisa abantu kunye neziganeko ebomini, kwaye bahlala besetyenziselwa ukwakha i-ledes yesici .
Nasi umzekelo omhle we-anecdote ukusuka kwindaba yaseLos Angeles Times malunga neendleko zokukhawuleza zokulwa nomlilo:
Ngomso kaJulayi 4, 2007, izandla zesikhwama zazilungisa umbhobho wamanzi kwindawo yangasese kwi-canyon encane kwindlela eya kwiZake Lake, malunga neekhilomitha ezili-15 kumntla weSolvang.
Iqondo lokushisa lalibheke kwii-100 degrees. Imvula ebusika yangaphambili yayiphakathi kweyona ndawo ephantsi kwerekhodi kwi-Southern California. Iintlanzi ezisuka kwintsimbi yensimbi yanyuka kwintsimi eyomileyo. Kungekudala ama-flames ayengxama e-Zaca Ridge.
Ngomso olandelayo, abafaki-mlilo abangaba ngu-1 bazama ukukhusela umlilo kwindawo encinci. Kodwa ekupheleni kwaloo ntambama, i-Zaca yenza i-run, ihambela empumalanga ibe yihlathi laseLos Padres. Ngo-Julayi 7, amagosa eNkonzo yeeHlathi ayaqaphela ukuba ayebhekene ne-monster.
Qaphela indlela abalobi, uBetina Boxall kunye noJulie Cart, batshwankathela ngokukhawuleza ngayo i-genesis yomlilo odlala indima ephambili kwibali labo.
Ulwazi lwangemuva luvakala ngathi luyinto enokuyifumana kwiindaba zeendaba, kodwa kubaluleke kakhulu kwiimpawu. Yonke inkcazo ebhaliweyo kakuhle kunye neempendulo ezimibalabala kwihlabathi aziyi kukwazi ukuba ungenalo ulwazi oluqinileyo ukuxhasa isiphakamiso sakho esizama ukuzenza.
Nanku umzekelo omhle wokuvela kwimimandla efana neLos Angeles Times malunga neengqungquthela ezikhankanywe ngasentla:
Iindleko zomlilo zasendle zixhaphaza isabelomali seNkonzo yeeHlathi Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, i-arhente yachitha imali engama-307 yezigidi ngokucutha komlilo. Kunyaka ophelileyo, uchithe imali eyi-1.37 yezigidigidi.
Umlilo uhlafuna ngeMali yeNkonzo yeMali kangangokuthi iCongress iqwalasela i-akhawunti ye-federal ehlukeneyo ukuze igubungele iindleko zokutshabalalisa.
KwiCalifornia, ukutshatyalaliswa kwemali yokutshatyalaliswa komlilo kuye kwadubula i-150% kule minyaka elishumi edluleyo, ngaphezu kwe-1 billion yezigidi ngonyaka.
Phawula indlela abalobi abaqhuba ngayo iinjongo zabo ngokucacileyo nangokungaqinisekiyo ukuba benze iinjongo zabo: Iindleko zokulwa nomlilo zikhuphuka ngokuphawulekayo.
UShawn Michaels WWE Career Timeline
Ubume bokuba Usebenza kwindawo
I-albhamu e-Best Priest Judas
Ukhuthaza ukuba iNkxaso Yenkxaso kunye nokuzimela
Umculo-mbonakaliso weMidlalo ukhuthaza umdla